Inona no ilainao hikaroka any amin'ny seraseram-panadihadiana any Amazon?
Raha eo amin'ny sehatry ny famaritana ny zavatra tianao hividianana ianao ary ahoana ny mety haha-ara-dalàna ny fanaovana fikarohana sy fandalinana sasany mba hamaritana izay tokony ho lasa mpandraharaha mendri-kaja? Na izany aza, amin'ny ankapobeny, tsy ampy ny mijery ireo torolàlana sasantsasany sy ireo hevitra matotra mba hananganana ny raharaham-barotra araka ny tokony ho izy. Mbola mila olona manana traikefa izay afaka mameno ny banga eo amin'ny fahalalanao ianao ary mametraka anao amin'ny làlana marina. Ny safidy tsara indrindra ho anao dia ny hifandray amin'ny manam-pahaizana Amazon consulting. Amin'ity lahatsoratra fohy ity dia hiresaka momba ny fomba hahitana ny manam-pahaizana momba ny consultation Amazon ianao ary hanomboka ny làlan'ny ecommerce araka ny tokony ho izy.
Jereo ny tolotra fanadihadiana Amazon izay ahitana ny fanamafisana ny fikarohana
Ny zavatra voalohany tokony hikaroka ao amin'ny Amazon consulting services dia SEO. Ny fahasamihafana ankapobeny dia tsy mitovy amin'ny Amazon SEO, ary mila mitady olona manana traikefa amin'ity sehatra ity ianao.
Amin'ny ankapobeny, Amazona dia vondron-tsarimihetsika toa an'i Google, Bing, ary ny hafa. Ny fahasamihafana dia ny fisian'ny mpampiasa Amazon ihany no mitady ny vokatra. Izany no mahatonga an'ity motera fikarohana ity naorina amin'ny algorithm samihafa izay ampiasaina hanampiana an'i Amazona hahavita asa tsara. Azonao atao ihany koa ny mahita Amazon products amin'ny fikarohana an'i Google. Amin'ny ankapobeny, ireo vokatra ireo dia miorina amin'ny toeran'ny SERP voalohany na faharoa. Na dia izany aza, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mahita fa mora sy mora kokoa ny mandeha any Amazona rehefa mitady ny vokatra toy izao eto dia afaka mahita ny antsipirihany rehetra ilaina ary hampitaha ny vidiny. Rehefa manadihady ny Amazon amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo fanontanianao ianao, dia ilainao ny vokatrao eo an-tampony. Izany no antony tokony hitadiavanao ny mpanolotsaina izay mahatakatra ny fototra iombonan'i Amazon ary mahafantatra ny fomba hanamboarana ny lisitry ny vokatrao amin'ny algorithm A9.
Ataovy azo antoka fa manaraka ny fitsipika amam-panahin'i Amazon ny mpanolo-tsaina anao
Ny Amazon dia manana ny tari-dàlana tokony hataon'ny mpividy ny raharahany amin'ity sehatra ity. Izany no antony ilainao hahitana manam-pahaizana iray izay mijanona miaraka amin'ny vaovao farany sy Amazon vaovao farany. Tokony hohazavainy ny fomba hiatrehana izany fiovana izany sy ny tokony hatao mba hisorohana ny orinasanao amin'ny fako. Ankoatr'izay, ny Amazon sales consultant dia tokony hahafantatra ny fitsipika rehetra mifandraika amin'ny fivarotana amin'ny Amazon ary manangana ny marketing aman-draharahan'ny paikady manaraka azy.
Ny mpanolo-tsaina mpanonofy iray dia tokony ho afaka manazava ny fahasamihafana misy eo amin'ny programa Vendor Central sy Seller Central
Tokony hahalala ny fahasamihafana eo amin'ny voalohany sy mpividy fahatelo ary afaka mifidy izay mety ho an'ny orinasa Business Amazon. Misy programa roa samihafa Vendor Central sy Seller Central. Manome safidy samihafa izy ireo arakaraka ny karazana raharaham-barotra anananao sy ny tanjon'ny orinasa. Ireo mpivarotra vao manomboka ny orinasany dia mety mahatsapa ho sahiran-tsaina amin'izany safidy izany. Ny andraikitra voalohany amin'ny mpanolo-tsaina dia ny hampiseho ny fahasamihafana misy eo amin'ny fandaharam-potoana ary haminavina raha toa ny programa voafantina hanome fahafaham-po ny filan'ny orinasa na tsia Source .